Himilooyinka Guddiga Dugsiga | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Golaha Dugsiga ee Minnetonka wuxuu leeyahay aragti heer caalami ah, heer sare ah oo ilmo-ku-saleysan. Guddigu waxaa ka go'an inuu hubiyo heer sare ee ku-guuleysiga ardayda iyo inuu noqdo mas'uul mas'uul ka ah ilaha degmada.
Sannad kasta Guddigu wuxuu qaataa himilooyin gaar ah si loo hubiyo heer sare ee waxbarasho heer sare ah ee Degmada. Himilooyinka soo socda ee Golaha ayaa loo ansaxiyay sanad dugsiyeedka 2020-21:
Himilada 1aad: Fayo-qabka Ardayda
Si loo raadsado heer sare oo ilmo-dhexaad ah, wanaagga ardayda ayaa ah mudnaanta joogtada ah ee qoysaska iyo Degmada. Sanadka 2020-2021, Degmadu waxay sii wadi doontaa horumarinta iyo hirgalinta qorshe taageeraya hamiga qoysaska ee ah inay ardaydoodu noqdaan dad bulsho ahaan iyo shucuur ahaanba xoog leh waxayna siisaa heerka taageerada lagama maarmaanka u ah ardeyda waxbarashadooda, bulsho ahaan, iyo niyad wanaagooda . Degmadu waxay sii wadi doontaa kobcinta iyo dhiirrigelinta dadaallada wanaagsan ee ardayga fayo-qabka iyo aqoonsiga sababaha horseedka u ah arrimaha saamaynta xun ku leh wanaagga ardayda.
Cusboonaysiinta ku saabsan hirgelinta iyo talooyinka waxaa loo soo bandhigi doonaa Guddiga bilaha Oktoobar, Janaayo iyo Maajo oo ay ku jiri doonaan:
Talooyinka ka imanaya Qiimaynta Ardayga iyo Fayoobaanta Qoyska ee lagu dhammaystiray 2019-20.
Dhameystirka Kooxda Focus Student iyo Waalidka ee lagu aqoonsaday Qiimeynta Fayo-qabka Ardayda iyo Qoyska.
Ku darista talooyinka muhiimka ah ee Guddiga La-talinta Caafimaadka Maskaxda.
Tababarka Shaqaalaha socda si loo siiyo dhammaan shaqaalaha taageerada, ilaha, qalabka iyo tababarka loo baahan yahay.
Qiyaasaha la qiyaasi karo si loo qiimeeyo fayo-qabka Ardayda iyo saameynta dadaallada Minnetonka ee ku aaddan baaxadda / xuduudahayaga sida hay'ad dawladeed.
Himilada 3aad: Qorshaha Istiraatiijiyadeed ee Degmada
Abuur oo u daabac qorshe shan sano ah oo istiraatiiji ah degmada oo leh muraayad qaas ah oo ku saabsan macnaha isqorista fidinta iyo canshuuraha gobolka lagu soo rogay. Cusboonaysiinta waxaa loo soo bandhigi doonaa si dib loogu eego Abriil 2021-ka oo ay ku jiraan barashooyin cusub.
Qaybaha muhiimka ah waa inay ku jiraan:
Qorshayaasha bannaan iyo kartida ee ardayda, fasallada iyo meelaha aan wax lagu baran
Qorshayaasha dayactirka iyo dayactirka ee goobaha waxbarashada iyo kuwa aan waxbarashada ahayn
Qorshaha tikniyoolajiyadda ee hantida go'an (kaabayaasha dhaqaalaha) iyo isbeddelada (ardayda, shaqaalaha, iibiyeyaasha) baahida iyo kharashyada
Manhaj waxbarasho oo si muuqata u daboolaya baahiyaha shaqaalaha berrito
Miisaaniyadda degmada ee tixgelinaysa saamaynta isbeddellada isqorista, baahiyaha xarunta iyo waxay siisaa xulashooyin wax ka qabta isbeddelka ku yimaada maalgelinta gobolka iyo deegaanka iyo diiwaangelinta.
Himilada 4aad: Barashada Multimodal
Iyada oo la raadinayo heer sare ee ubadka-ku-tiirsan, Dugsiyada Minnetonka waxay ballaarin doontaa hirgelinta waxbarashada shaqsi ahaaneed ee ardayda waxayna sii wadi doontaa horumarinta qaabab si gaar ah wax looga baro si loo daboolo baahiyaha gaarka ah, awoodaha iyo danaha dhammaan ardaydayada, qoysaska iyo shaqaalaha.
Hirgelinta bilowga ah iyo warbixinta horumarka waxaa lagu soo bandhigi doonaa gadaasha dambe ee Warbixinta Furitaanka dugsiga Oktoobar 2020, iyadoo lagu soo kordhin doono warbixinno horumarineed sida loogu baahan yahay.
Samee jadwal edbinta ah oo koobaya tilmaamaha caafimaadka iyo siyaasadda ee Gobolka Minnesota / Waaxda Waxbarashada ee Minnesota
La habee Mannetonka Manhajka si ay ugu suurogasho ardayda inay gaaraan himiladooda ugu sareysa iyadoo la waafajineysa jawiga waxbarasho si loo daboolo baahiyaha geeddi-socodka waxbarashada iyo baahiyaha qoysaska iyadoo si fiican loo taageerayo heerka sare ee carruurta.
Mawduucyada waxbarashada waa in laga filaa in lagu soo bandhigo qaabab kala duwan, iyadoo laga faa'iideysanayo guusha nidaamka Tonka Online, iyo sidoo kale qaab shaqsiyeed oo isku dhafan iyadoo la tixgelinayo baahiyaha iyo awoodaha dhammaan qeybaha geeddi-socodka waxbarashada.
Degmadu waxay lahaan doontaa qorshayaal si dhakhso leh loogu aqoonsado ardayda barta ardayda kuwaas oo u baahan taageero dheeri ah oo xagga waxbarashada iyo / ama caafimaadka maskaxda ah waxayna abuuri doontaa habab kale oo lagu taageerayo gaaritaanka waxbarashadooda.
Degmadu waxay waafajin doontaa qorshooyinka hadda jira iyo qaababka taageerada si loo tixgeliyo baahiyaha gaarka ah ee ardayda ee dhinacyada tacliinta, bulshada, shucuurta, lahaanshaha iyo caafimaadka maskaxda ee hannaanka waxbarashada.